Clamping umshudo Ifenisha: izinhlobo nosayizi
Njengoba kubonakala kahle igama, izipikili ifenisha ukhonza ukusondelana ndawonye izingxenye ngazinye isakhiwo, ukuze intfo yinye ebalulekile. Lezi iziqobosho ingasetshenziswa hhayi kuphela abakhiqizi, kodwa futhi nombuthano ngqo ekhaya.
Eqinisweni, i-imishudo amaningi amakhulu. Kodwa kuncike ukuma kanye nosayizi, bangakwazi zenzeka kwelinye noma kwenye indawo zokukhiqiza:
wezolimo ukusetshenziswa plowshare imishudo, ngayo nefunda ngayo kukhona ukufakwa nezinamathiselo imishini;
lisetshenziswe ifenisha ukukhiqiza, ngokulandelana, ifenisha;
emkhakheni ukwakhiwa komgwaqo imishudo endleleni esetshenziswa (nge othelawayeka abhekene necala imishini);
lenhlangano izimoto ukuthatha hardware ubunjiniyela kuphela.
Ngaphansi endaweni ukukhiqizwa ngamunye ukuthuthukisa hardware zabo:
Ifomu classical - ibhawudo has a ikhanda ubuso eziyisithupha, futhi phezu kolunye uhlangothi wentambo camera. Through kungenzeka ukuhlanganisa izakhi ezimbili noma ngaphezulu. Asetshenziswe kanye nati.
Flange imishudo. Kukhona "isiketi" round ukuma, sise kumila ikhanda, ngenxa okuyinto asikho isidingo ukusebenzisa washers.
Egoqekayo. ifomu yabo eziyinkimbinkimbi kwaholela ukusetshenziswa kudivayisi esinjalo imishudo amadivayisi ephakamisa.
Ihange imishudo. Zinikeza ngokusebenzisa izakhi uxhumano. amandla ekhulile yemiphumela okunamathiselwe kuvumela idatha iziqobosho ezindaweni ezidinga enokwethenjelwa.
Amabhawodi kwensimbi. Lezi zici isigqoko-loop kunokuba senze ngendlela evamile. Lezi nezikulufi aqinisekise izintambo kaningi, njengoba bebizwa ukumelana kahle umthwalo wonke-eksisi, ngokulinganayo wokuyidlulisela phezu isizinda.
Ububanzi ifenisha nokufakwa
amasethi Ngasekuqaleni ifenisha eqokelelwe ngezindlela amagejambazo akhethekile dowels, kodwa ubuchwepheshe hhayi emi namanje, ngakho ukuba esikhundleni saso kungene wafika idatha hardware. Ifenisha umshudo tensioning isetshenziswa ekukhiqizeni:
Imisa i ikhishi;
iziqobosho ezinjalo zivame ezisetshenziselwa ukwakha nokulungisa, ezifana iladi noma Gazebo lokhuni. Uma uhlela ukuba usethe isakhiwo sokhuni esincane, lesi sici futhi ewusizo.
Njengoba ekhaya isethi ezimweni eziningi ezenziwe ngokjuni, ifenisha kanye umshudo yenzelwe ngqo le nto. Okuvame kakhulu ekukhiqizeni ifenisha namuhla fiberboard kanye particleboard. metal okunjalo iziqobosho zingamelana ekucindezelekeni mechanical bafakela ifenisha ngokuhamba ukusebenza kwawo.
Ukuthandwa imishudo idatha ngenxa yokuthi awayona zalutho. Okungukuthi, e inqubo ezihambayo njalo kungenzeka ukuba ingenzele isethi, futhi endaweni entsha alakhe. Futhi lokhu awasebenzi kuphela yasekhaya kodwa futhi ehhovisi ifenisha.
Ifenisha umshudo njengoba isici yasibamba kuyisisekelo arsenal njengoba ezimbonini, futhi izinkampani ikakhulukazi ifenisha. Ngaphezu kwalokho, kwanele ukumane nje ukuthenga, ngakho ngisho ngabe i-self-inhlangano yabantwana bakwa-nezindaba umkhiqizo uxhumano izingxenye asivelanga.
Isici ifenisha imishudo
Njengoba isizathu womshini izingxenye ezifana esithathwayo carbon steel. Umkhiqizo osuphelile has a enamathela zinc esihlinzeka ukumelana ukugqwala izinqubo. Kwezinye izimo, izinhlobo ezithile futhi Chrome. Libuye ngokuvamile kungenzeka ukuhlangabezana steel, nethusi noma ithusi umshudo ifenisha.
Uma ifenisha isetshenziswa inhloso yazo, kulesi simo-ke akudingeki imithwalo ngokweqile (hhayi njalo ukuqoqa futhi ukuqaqa), inkathi wokusebenza hardware okunjalo kuyoba ezingaphezu kweyodwa eyishumi.
Kuye ihadiwe uya khona ungaba intambo elandelayo wokugubha: M6, M8, i-M10 kanye M12. Ubude ibhawudo amabanga enjalo kusukela 1.6 kuya ku-20 cm. Okufakwe ne ifenisha imishudo ngokuvamile nati washers, okuyinto zivumelana Ingxenye evundlile hardware.
Ifenisha umshudo has izigaba eziningana:
Nokubopha ikhanda nge shape isiyingi, usayizi omkhudlwana.
Bolt ifenisha udevu futhi ikhanda ongaphambili omise.
Nokubopha ikhanda nge shape flat.
Izinhlobo ifenisha hardware
Lapho ukuhlangana imiklamo isiguqo nezingxenye ezithambile ifenisha usebenzisa umshudo (GOST 7801), okuyinto has a ikhanda ongaphambili omise amadevu. Wakhe ukukhweza emgodini kusengaphambili usebenzisa buhlungu isando. Moustache kuyasiza nokuqalisa nenkanuko edlulele ku metiz wayengakwazi ukujikisa. Ukuze yasibamba nokunokwethenjelwa eminye esetshenziswa nati washers flat. Kulesi sigaba izesekeli ethandwa kakhulu usayizi 6x30 futhi 6x40, intambo imethrikhi okuyinto - M6, M8, i-M10 kanye M12, futhi ubude - 3 no-4 cm.
Ifenisha umshudo uhlobo "screw-tie" kusiza ukusebenza nge plywood multi-ungqimba, ithafa futhi chipboard laminated. Linikeza ngokunemba wokugubha ngoba anchorages. Lolu hlobo has a ikhanda countersunk, okuyinto kuvuna ngaphansi umgodi ekhethekile. Esikhathini ukukhiqizwa osayizi asetshenziswa kabanzi 5h50 futhi 7h50, a white- noma zheltopassirovannym camera ne-zinc-kuhlinzwa.
Ukuze izindawo kufihlwe headset esetshenziswa ifenisha umshudo, esingeyena izingqimba ezengeziwe zokuzivikela. Kodwa lokhu kungatholakala kuphela ezimweni lapho umkhiqizo kuyoba endlini ezingeni elikhulu umswakama. Endabeni okuphambene, kunconywa ukuthi ihadiwe kwadingeka ungqimba zinc ethwele izakhiwo zokuzivikela. Uma nezikulufi ezidingekayo futhi wambozwa-chrome, wasinikeza a ukubukeka yobuhle ngaphezulu.
Kukhona isigaba ehlukile imishudo, okuyizinto ngenxa yokusebenza izici zabo hhayi kuphela esetshenziswa izicelo ezimbonini, kodwa futhi ifenisha womshini. Din 603 - ifenisha umshudo elinendawo shank bunjwa cylindrical nge ekhanda kube sekupheleni. Lapho lolu chungechunge kungase kungene obuphelele lonke noma abathile kuphela ingxenye. Ukwakha compounds esetshenziswa nut noma ngaphambili ukulungiselela umgodi kwelinye izingxenye ukuba uphawu.
Lolu hlobo okunamathiselwe inikeza amandla, ngakho-ke isetshenziswa hhayi kuphela izinkuni kodwa futhi metal izakhiwo. It kungatholakala Ukuduma komsindo umgwaqo emapheshana kanye ezicijile amabhuloho. Ngokuqondene ifenisha, ifenisha omunye umshudo kuyinto ekahle Suites engadini, okuyinto zenziwa metal elincanyana.
Indlela ukukhetha esihlalweni ikhompyutha
Armchairs ngaphandle yokubeka - esikhundleni imibhede bendabuko
Uyini igesi ukushaqeka mfutho ifenisha, futhi kusebenza kanjani
Modern izindlela embhedeni lift
Umuthi 'Amoxiclav "angina ukusiza ingane
Nqampuna faktor.Chto kuba futhi Yeka ukuthi kubaluleke kangakanani lapho ukhetha ikhamera yedijithali.
Umculi waseMelika u-Orbison Roy: biography, ubuciko
Izinhlobo ukunyakaza. Kulula kabi
Ukukhetha ilungelo ukukhwehlela kumasayiraphu izingane ezingaphansi konyaka owodwa
It kuvela ukuthi KuFundZa has nezihibe
Zener - siyini lesi futhi ziyini?